Bankiga Adduunka oo sheegay inuu dhaqaalaha Soomaaliya korayo 3-4 Boqolkiiba – Radio Muqdisho
Bankiga Adduunka oo sheegay inuu dhaqaalaha Soomaaliya korayo 3-4 Boqolkiiba
Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la saadaalinayaa in uu kordho heerka Sanadlaha ah qiyaas u dhexeeysa 3 iyo 4 Boqolkiiba, Bangiga Adduunka ayaa sidaasi ku sheegay warbixin uu soo saaray Khamiistii Shalay ahayd.
Bankiga Aduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha Waddanku uu kor u kacay 2.3% Sannadkii 2017, halka uu 4.4 Boqolkiiba ahaa 2016-kii, taas oo muujineysa saameynta khasaaraha weyn ee kasoo gaadhay dhaqaalaha waxyeelladii ka dhalatay abaaraha, iyadoo saamaysay Xoolaha iyo wax soosaarka Beeraha iyo dhoofinta dalagga.
Warbixinta ayaa sheegtay in xaddiga dhoofinta Xoolaha nool oo ay Soomaalidu ku tiirsan tahay 70 % uu hoos u dhacay 75 %, iyadoo Sanaddii 2015 la dhoofiyay 5.3 Milyan oo Neef halka Sanaddii 2017-kiina la dhoofiyay oo qura 1.3 Milyan oo Neef.
John Randa, oo ah dhaqaaleyahan sare oo ka tirsan Baanka Adduunka ayaa sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in ay sii waddo kobcinta dhaqaalaha maaliyadeed si ay u hesho maalgelin Dadweyne oo ku saabsan adeegyada aasaasiga ah.
“Si loo gaaro koboc sare oo xagga dhaqaalaha ah, Soomaaliya waxay u baahan tahay in la dedejiyo dib-u-habeynta qaab-dhismeedyada ilaha dhaqalaha iyo Canshuuraha iyo ” ayuu yiri Randa.
Warbixinta ayaa sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu si weyn u koray Sannadihii la soo dhaafay, isagoo weli u nugul dhibaatooyinka soo noqnoqda ee ka mid tahay Abaarta iyo musiibooyinka kale.
Waxaa sidoo kale lagu sheegay war bixinta in Soomaaliya ay leedahay mid ka mid ah Suuqyada dhaqaale ee ugu badan adeegsiga Lacagaha lagu kala xawilo Mobile-ka marka la eego caalamka oo dhan , iyadoo uu xiriir fiican oo wax is weydaarsi ahna kala dhaxeeyo Waddamo badan oo Afrika ah.
Bankiga Aduunka ayaa sheegay in qiyaastii Bil walba laysugu gudbiyo Taleefannada Gacanta Lacag gaareysa 2.7 Bilyan oo Doollar-ka Maraykanka ah.
Duufaanta Florence oo ku dhufatay Maraykanka gobalada Bariga
Ciidamada amniga oo gacanta ku dhigay horjooge ka tirsan Al-Shabaab